၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လူတစုက ဖျက်ဆီးနေသည်။ လူတစုက တလွဲအသုံးချနေသည်။
ဆောင်းပါးကို ရေးသားရခြင်း အကြောင်းမှာ မြန်မာပြည်သမိုင်းတွင် မဖြစ်သင့်သည်များ မဖြစ်ပွားရလေအောင် ဆိုသည့် ရည် ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ရေရှည်မှာ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များကို မျက်ကွယ်ပြုလာမဲ့ အရေး ကို မြင်မိတဲ့ အတွက်လည်း ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရေးသားတဲ့အတွက် အမုန်းပွားမဲ့ လူတွေလည်း များလာမယ် ဆိုတာကိုလည်း ကြိုတွက်မိပြီးသားပါ။
ဖိနှိပ်သူ စစ်အစိုးရက ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်မည်၊ ပြီးရင် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မည်ဟု ပြောနေသော အချိန်တွင် ကိုယ့် အချင်းချင်းကို ဝေဖန်ရသော ဆောင်းပါး ရေးသားရသည်မှာလည်း ကိုယ့်ဖက်က အားနည်းချက်ကို ပြသရာ ရောက်ပါတယ်။ သို့သော် မပြော မပြီး၊ မတီးမမည် ဆိုသလို ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေများအတွက် ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်မှာ ပြောထားသလိုပါပဲ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လူတစုက ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ နောက်လူတစုကတော့တလွဲ အသုံးချဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အပြီးတိုင်ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားနေသူများကတော့ လက်တဆုပ်စာ ဗိုလ်ချုပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖျက်သိမ်းချင်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က လူထုပေးတဲ့ မဲများနဲ့ အပြတ်အသတ် အောင်ပွဲဆင်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်အောင်ပွဲကို အသိအမှတ် မပြုလိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့ သည်အောင်ပွင့်အောင်သီးကို ဖျက်ဆီးဖို့အတွက် စစ်တပ်လွှမ်းမိုးရေး လမ်းစဉ်ကို အုတ်မြစ်ချပေးမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လာမဲ့မေလမှာ အတည်ပြုဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လူတစုက ဖျက်ဆီးနေသည်လို့ ဆိုလိုက်တာပါ။
အဲသည်ကမှ တဆင့် ၂၀၁၀ မှာရွေးကောက်ပွဲ အသစ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကြောငြာထားတာလည်း အများသိထားပြီးဖြစ် ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုံးကလို ပြည်သူတွေထောက်ခံတဲ့ ပါတီများအနိုင်မရေစေဖို့အတွက် စစ်တပ်ကအကြီး အကျယ် ညစ်ဦး မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ။ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ အမှန်တကယ်သာ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးမယ် ဆိုရင် ပြည်သူတွေ နှစ်သက်တဲ့ ပါတီများသာ အနိုင်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သည်တခေါက်တော့ အဲသလို မဖြစ်စေဖို့ စစ်တပ် အနေနဲ့ မညစ်မဖြစ် ညစ်ရတော့မှာပါပဲ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့် လူထုတင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ တရားဝင်မှုကို ဖျက်သိမ်းဖို့ကလည်း အလို အလျောက် ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
စစ်တပ်ဟာ လူထုဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုရုံသာမက လူထုဆန္ဒကို မျက်လှည့်ပြပြီး ကိုယ့်ကိုအများက ကြိုက်လို့ အရွေးချယ် ခံရ လေဟန် ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ တပါးသူက မပေးလိုတဲ့အရာကို ဇွတ်အတင်းယူခြင်း၊ လှည့်ဖျားလိမ်လှည် ၍ ယူခြင်းတို့ဟာ ခိုးယူခြင်းမြောက်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း အလားတူပါပဲ။ အများကလိုလို လားလား အပ်နှင်းခြင်း မပြု ဘဲ လှည့်ဖျားပြီး ခေါင်းဆောင်မှုကို ဇွတ်အတင်းယူခြင်းဟာလည်း နောက်ထပ်ခိုးယူခြင်း တမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ရလဒ်ကို လူတစုကတလွဲ အသုံးချနေပါတယ်။ ဘယ်သူတွေများ တလွဲအသုံးချနေပါသလဲ။ စင်ပြိုင် (သို့) အဝေးရောက် ဖက်ဒရယ်အစိုးရတခု ထူထောင်မည်ဟု ကြိုးစားနေသူတွေကို ရည်စူးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်ဖို့လိုတာလည်း အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု အတွက် ဖွဲ့စည်းမဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ပြည်သူတို့က ရွေးကောက်မြှောက်ထားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတွေကိုသာ ခေါင်းခေါက် ရွေးချယ်ပြီး ဖွဲ့၍မရပါ။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ လူနှင့် ကိုယ်ဖွဲ့မည်ဟုဆို လာပါက အနှီလမ်းစဉ်သည် ဒီမိုရေစီကျင့်စဉ်ကို မျက်ကွယ်ပြု၍ ဆောင်ရွက်သည်ဟု ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ စစ်တပ်သည်လည်း သူတို့ စိတ် ကြိုက်ရွေးထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညောင်နှစ်ပင် ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့တာ မမေ့သင့်။
အခုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေများကတော့ ဖိနှိပ်လွန်းသည့် စစ်အစိုးရကို ပြန်တိုက်ဖို့အတွက် စင်ပြိုင် (သို့) အဝေးရောက် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ ထူထောင်ဖို့လိုနေသည်ဟု အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဟု သိရပါတယ်။ ထိုဖက်ဒရယ် အစိုးရခေါင်းဆောင် အချို့နှင့် သင့်တော်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း ထည့်သွင်း၍ ဖွဲ့စည်းမည်ဟုလည်း ထွက်ပေါ်လာသော သတင်းများ အရ သိရှိရပါတယ်။ ရွေးကောက်ခံထားရသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အမတ်များ ပါဝင်မယ် ဆိုတာကတော့ ပါသင့်ပါထိုက်တဲ့ သူများဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ထားပါတော့။ ဒါကသဘာဝလည်း ကျသည်ဟု ပြောနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် သင့်တော်သောလူ ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာကို နားမလည်နိုင် ဖြစ်ရပါတယ်။ ပြည်ပ တွင်ရောက်ရှိနေသော ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက တိုင်းရင်းသား အမတ်များကို ဆိုလိုတာလား။ သူတို့လည်း ပါဝင်ဖို့ ဆန္ဒရှိ သည် ဆိုပါက ပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လူထုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက်ထားသည့် သူများဖြစ် သော ကြောင့်ပါ။ သင့်တော်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဆိုတာက မရှင်းပါ။ အခုပြောနေသော အဝေးရောက် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ ဖွဲ့ရာတွင် ပါဝင်မည့် သူများသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည် ဆိုခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေများအတွင်းနှင့် နယ်စပ် အခြေစိုက်သော လူထုအတွင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း တင်ပြဖို့လိုသည်။ တော်လှန်ရေးအတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ စိုက်လိုက်မတ်တတ် ပါခဲ့သူ ခေါင်းဆောင် များ ဖြစ်သော်ငြားလည်း ပြည်သူက ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ရွေးချယ်ထားသူ မဟုတ်ပါက ဤဖွဲ့စည်းမည့် ဖက်ဒရယ် အစိုးရတွင် မပါဝင်သင့်။ ဒီမိုကရေစီကို ချစ်မြတ်နိုးပါက ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို လိုက်နာ ဖို့တော့လိုသည်။ အခုတော့ ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်း ဆိုသလိုဖြစ်နေတာတွေကို ကြားနေရသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက တင်မြှောက်လိုက်သော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် အချို့ကိုဘန်းပြ၍ ကိုယ်ကြိုက်သည့်သူများ နှင့် လက် သင့်ရာ စားတော်ခေါ်သည့် အဝေးရောက် အစိုးရမျိုး မဖွဲ့သင့်ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် တိုက်ခဲ့သူဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံရေးတွင်ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ပါဝင်ဖို့ စစ်တပ်က နှုတ်ထွက်ခါ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုသော ရာထူးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ မဲပုံးထောင်၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို ထူထောင်ဖို့ သူကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကို မတိမ်းမစောင်းစေရဘဲ လိုက်နာခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
နောက်အရေးကြီးသော အချက်တချက်ကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ ၂၀၀၅ ဖေဖ၀ါရီလ ၁၂ရက်နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ ကြေငြာချက်တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲသည့် ကြေငြာချက်က သည်လိုဆို ထားပါတယ်။ “စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းမည်ဟု ကြားသိရသည်။ စင်ပြိုင်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ မူဝါဒ မဟုတ် ကြောင်း ကြေငြာလိုက်သည်။ ” အလွန်တိုတောင်းရှင်းလင်းသော ကြေငြာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင် အမတ် များ စင်ပြိုင်အစိုးတွင်ပါဝင်လာပါက မိမိ၏ မိခင်ပါတီမှ ချမှတ်ထားသော သဘောထားနှင့် လွဲနေကြောင်း ကိုလည်း သိသာ စေနိုင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာလည်း အဝေးရောက်ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဆိုတာ ရှိထားနှင့်ပြီ။ ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ အားနည်း တာဆိုတဲ့ အပိုင်းများကို လိုအပ်သည့်နည်းနာများဖြင့် ရှေ့ဆောင်၍ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက ကျနော်တို့မှာ အဝေးရောက် အစိုးရနှစ်ရပ် ရှိလာတော့မည်ဆိုသည့် သဘောမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ရှိနေတာကို တွေ့လာရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတချက်အနေနဲ့ကတော့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ဖြစ်ခဲ့သည့် သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သော လူထုလှုပ်ရှား မှုသည် မည်သည့် ပြင်ပက ဦးဆောင်မှုကြောင့်မှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြည်သူတို့၏ ခံစားနေရသော ဆန္ဒများမှ တဆင့် ပေါ် ထွန်းလာသော ရလဒ်သာဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးကနေ စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ခြင်းသည် စစ်အစိုးအရကို မတုန်လှုပ် စေပါ။ ပြည်တွင်း လူထုတိုက်ပွဲကသာ စစ်မှန်သော တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ဖြစ်စေ (သို့) အခြားလူ ပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) နှင့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေ မည်သူမဆို အများက မပေးအပ်ဘဲ၊ လူထုက မအပ်နှင်းဘဲ ဦးဆောင်မှုကို ဇွတ်အတင်း ယူဆောင်ခြင်းသည် ခိုးယူခြင်းသာ မည်ပါတယ်။
လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူရဲကောင်းများ အမှန်လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးမျိုးအထွေထွေသော သူခိုးများကို ခေါင်း ဆောင်တင်ဖို့ ဆိုတာတော့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို မျက်ကွယ်ပြုလွန်းရာ ရောက်သလို ပြည်သူများကိုလည်း စော်ကားရာ ရောက်ကြောင်း သည်နေရာက တင်ပြလိုပါတယ်။
၃ ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
YOU ARE RIGHT! I AM TOTALLY AGREE WITH YOU.
NCGUB has been already formed. I have no idea why they try to form another exile federal government. This is absolutely crazy idea.
since ever NCGUB formed,i feel like itanecessary fallcy,but now it's oblviously simply wrong man,idiot